म हिंडेको भन्दा अलिक परको बाटोमा बीस-तीस जना मान्छेहरु लास लिएर ओरालो लागेको देखियो । कुहिरा भित्र हराउँदै चिहाउदै गरेको जुनको उज्यालो जस्तो लाग्छ । अगाडि धान र पैसा छर्दै हिडेको सेतो कपडा लगाएको...
नेपालमा को हुन् आदिवासी र जनजाति ?
नेपालमा केही समय अघिदेखि आदिवासी जनजातिका वारेमा पुनः बहस उठेको छ । खास गरेर नेपालमा रहेका बाहुन, क्षेत्री र दशनामी समुदायले समेत आफूलाई आदिवासीमा सूचिकरण गर्न माग गरेपछि यो छलफल पुनः अघि बढेको हो...
इलामे चियामा विदेशी पर्यटकको आकर्षण
इलामको सुन्दरपानीस्थित हरियाली चियाबारी घुमिसकेपछि जर्मनी नागरिक थोमस होल्स प्रसन्न मुद्रामा थिए । विश्वका दर्शनौं राष्ट्र घुमेर अनुभव संगालेका थोमस यहाँका थुम्का थुम्का डाडाभरि देखिएको हरियो चिया वगान र प्राकृतिक सौन्दर्यताबाट प्रभावित थिए ।...
यसपालि कुन पार्टीले कसरी जित्ला चुनाव ?
कृष्ण अविरल मंसिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हुने लगभग निश्चित भएको छ । यतिबेला कांग्रेस-एमालेका अधिकांश नेता-कार्यकर्ता दुईतिहाइ बहुमतको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई लागिरहेको छ, एमाओवादी फुटेर दुई चिरा भएको मौकामा चुनावमा...
करणी लेख्ने पत्रकारको कठोर कलम
अपराधबारे समाचार लेख्दा नेपाली पत्रकारितामा धेरै समस्या देखिएका छन् । त्यसमध्ये आचारसंहिता बिर्सने परिपाटी बढ्दो छ । सबैभन्दा पहिले म स्वयं अपराध विषयमा समाचार लेख्दा भए गरेका त्रुटीहरू स्वीकार्छु । आरोपीलाई दोषीका रूपमा ठाडो भाषामा...
किन चाहियो महिला कर्मचारीलाई ४० वर्ष ?
हाल महिलाका लागि निजामती सेवा प्रवेशमा कायम रहेको ४० वर्षको उमेर हद त्रुटीपूर्ण रहेको छ । विगतमा महिलालाई सहुलियत दिन पुरुषको तुलनामा ५ वर्ष थप समय दिइएको थियो । आरक्षणबाटै महिला सहभागिता सुनिश्चित भइसकेपछि...
कमजोर अनि पुराना खाट, त्यसमाथि फोहर र थोत्रो तन्ना.....छरपस्टरुपमा फालिएका अस्थाई साधन (कन्डम) का खोलहरु । भित्तामा लामखुट्टे र उडुस मारेरबनाइएको रातो कालो टाटेपाटे धर्का । कोठाहरु पनि खाटकै आकारका एकदमै साघुँरा । तर,निस्सासिएका...
खिलराज रेग्मीका तीन ऐतिहासिक भूल
पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट देखाइसकेका छन् कि खिलराज रेग्मीले आफ्नो नाम जानेर होस् या अञ्जानमा, संविधानसभाको मलामी, स्वतन्त्र न्यायालयका धुन्धुकारी एवं द्वन्द्वको जन्तीका रुपमा इतिहासमा लेखाउँदै हुनुहुन्छ । अहिले उहाँ असोज १० गते चुनावी कार्यक्रम...
सवारी दुर्घटना र महेन्द्र गौतमहरूको पीडा
घटना गत वैशाख १५ गते साँझ ७ बजेको हो । मोरङको पथरीमा सडक किनारामा को १ त ७४२४ नं.को ट्रयाक्टर रोकिइराखेको थियो । तीव्रगतिमा बा २३ प ५८९३ नं.को मोटरसाइकल हाँकिरहेका इटहरीका एक युवा...
राजनीतिको क्रीडास्थल बन्दै छ पर्यटन
धेरै अवरोध र अभावहरुको सामना गर्दै आइरहेको नेपालको पर्यटनमा अहिले नीतिगत पक्ष र कार्यक्रमिक पक्ष दुबै एकैचोटि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता खडि्कएको छ । यहाँ विभिन्न किसिमका ऐननियम ल्याइएका छन्, तर कार्यान्वयन भएका छैनन् ।...
दस बाह्र बर्षअघि मैले एउटा नाम चलेकै नेपाली म्यागजिनमा एकजना राई थरका भारतीय गोर्खाको अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ । उनी भारत पाकिस्तान बीच सन् १९९९ मा भएको कार्गिल युद्धद्दमा लडेका गोर्खाली रहेछन् । ठूला अक्षरमा...
क्यान्सर सम्मेलन : मनिषा, फत्तेमान र डा. वाग्ले
राजधानीको याक एण्ड यतिमा शुक्रबारदेखि रक्त क्यान्सरसम्बन्धी दुई दिने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटनमा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले 'क्यान्सर मृत्यु होइन' भन्ने भावुक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।क्यान्सरसम्बन्धी नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन भइरहँदा संयोग...